Technical Core of Rammer - Nantong ant Machinery Co., Ltd
Rammer luhlobo kwezixhobo tamping abanama-frequency lokungcangcazela, leyo isebenza ezinzima iimeko requiers injini enokumelana lokungcangcazela Strong. Njengomthombo wamandla we Rammers, Iimoto jikelele akulungile ukuba rammer ngenxa abahluphekayo ukumelana lokungcangcazela Ang ubomi babo inkonzo. ngoko ke, abanye abenzi amazwe ukuvelisa injini ekhethekileyo rammers, Kodwa spare iindawo ixabiso eliphezulu kakhulu, kwaye ixesha lonikezelo inde kakhulu. E persent injini kakhulu ethandwa esetyenziswa yi rammers are Honda GX100, robin and GX120 EH12, etc. Abo iigiyeri zezisebenziseka ngokubanzi kwaye abaza kuzisebenzisa ezinikwa convient.
Rammer ibe yimfuneko kakhulu kwi spring, kwaye steel spring kumele na amandla aphezulu fatigue, kungenjalo kuya kuba lula ukuba kwempixano ezilahlekileyo yaye aziyi kusebenza kwaphulwa ngokwanelisayo kunye.
3. uyilo Umgaqo okulinganisa olutshintshayo
Ukuhanjiswa rammer ikakhulu nkqo high-frequency yomgama Buyisela motion, ukuphakama machine ingaphezulu, ukuze intsalela enefuthe ngayo umatshini yonke kubaluleke kakhulu, esifuna design ezizodwa kunye nokuvavanywa okulinganisa olutshintshayo, kungenjalo umatshini zizimbambazele ukungazinzi, nzima ukulawula, kuyandisa kakhulu amandla yabasebenzi kwabasebenzisi
Edlulileyo: intshayelelo emfutshane of EPA
Okulandelayo: Eziphathekayo umsiki Qg180fx